ပြင်ဆင် သုံးစွဲရမည့် စကားပုံများ	Posted on August 16, 2009	by mettayate “စေတနာသည် လူတိုင်းနဲ့မတန်” ကို အဓိပ္ပါယ်ချဲ့ရင် – ကျေးဇူးသိတတ်သူအပေါ်မှာသာ ပေးကမ်းစွန့်ကြဲရမယ်။ စေတနာထားရမယ်။ ကျေးဇူးမသိတတ်တဲ့သူအပေါ်မှာ ပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်းမပြုရ။ စေတနာမထားရလို့ ဆိုလိုတာပဲ။ ဒီစာတမ်းကိုရေးခဲ့တဲ့သူဟာ ခံစားချက်ရှိခဲ့လိမ့်မယ်။
မြင့်မြတ်သူဆိုတာ သူတစ်ပါးကိုကူညီခွင့်ရလို့ ကူညီတဲ့အခါ ဘယ်တော့မှ မျှော်လင့်ချက်မထားရဘူး။ သူတစ်ပါးစေတနာကိုကြည့်စရာမလိုဘူး။ ကိုယ့်စေတနာကိုယ်ကြည့်ရမယ်။ နဂိုကတည်းက ဘာမျှော်လင့်ချက်မှမထားဘဲ ကူညီခဲ့ရင် တစ်ဖက်လူက ကျေးဇူးသိလည်း ၀မ်းမသာဘူး။ (လောဘမဖြစ်ဘူး။) တစ်ဘက်လူက ကျေးဇူးကန်းလည်း ၀မ်းမနည်းဘူး။ (ဒေါသမဖြစ်ဘူး)။ အဓိက ကတော့ ကိုယ့်စေတနာမပျက်တော့ဘူး။ အရင်ကတည်းက မျှော်လင့်ချက်နဲ့ကူညီခဲ့ရင် တစ်ဖက်သူက ကျေးဇူးသိရင် ကိုယ့်စေတနာမပျက်ပေမယ့် ဒီလူ ကျေးဇူးကန်းရင် ကိုယ့်စေတနာပျက်သွားတော့ အလကားဖြစ်ရော။ နောက်တစ်ခုစဉ်းစားရမှာက ကျေးဇူးကန်းသူတစ်ယောက်နဲ့ ကြုံလိုက်ရတာနဲ့ နောက်ထပ်ဘယ်သူ့အပေါ်မှ အကူအညီမပေးတော့ဘူး။ မပေးကမ်းတော့ဘူးဆိုရင် ဒါနပါရမီ မဖြစ်တော့တဲ့အတွက် ကိုယ်လည်းနစ်နာတယ်ဆိုတာ သတိထားသင့်ပါတယ်။ “သင်ကောင်းလျှင် ကျွန်ုပ်မဆိုးပါ” အပေါ်ယံကြည့်လျှင် နှစ်သက်ဖွယ်ဟု ထင်ရသော်လည်း သေချာတွေးကြည့်လျှင် လူမိုက်အားပေးဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ထိုစကားပုံး၏အဓိပ္ပါယ်၌ သင်ကောင်းလျှင် ကျွန်ုပ်ကောင်းမည်။ သင်ဆိုးလျှင် ကျွန်ုပ်ဆိုးမည်။ ပါးရိုက်နှင့် နားကိုက်မည်မည် ဟူသော စကာပုံနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
ရောက်ရှိလာသော ဧည့်သည်ကို အလှူခံအဖြစ် သဘောထားပြီး စေတနာသဒ္ဓါတရားပြည့်ဝစွာဖြင့် ကျွေးမွေးမှ ကုသိုလ်အပြည့်ရပြီး ဆန်ကုန်ရကျိုးနပ်သည်။ သို့တည်းမဟုတ် ၀တ်ကျေတမ်းကျေ မဖြစ်လို့ ကျွေးရသောသဘောနှင့်ကျွေးလျှင် ဆန်ကုန်တာသာ အဖတ်တင်မည်။ ထို့ကြောင့် ဧည့်သည်လာလျှင် ဆန်မကုန်စေနဲ့ဟု သတိပေးထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
This entry was posted in ဆုံးမသြ၀ါဒများ and tagged အရှင်ဇ၀န(မေတ္တာရှင်)ရွှေပြည်သာ. Bookmark the permalink.	← စကားအရာ အင်္ဂါလေးတန်